Hogarth Shakespeare Chirongwa. Vanyori Vakuru Vachifukidza Mabasa aShakespeare | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Novela, Nhema nhema, dzakawanda
El Hogarth Shakespeare chirongwa yakatanga nechinangwa che nyorazve zvinyorwa zvaShakespeare kune veruzhinji vezana reXXI. Yaive chikamu chemhemberero dze Yegumi nemakumi mashanu yekufa kwake muna 2016. Avo vane mutoro vakagogodza pamikova ye vanyori vane mukurumbira kuronga kutora chikamu mune a ongorora yemabasa ake akakosha.
Mhedzisiro yacho yakatanga kuoneka kubva 2015 uye ichagara kusvika 2021. Vanyori ivavo vaive Margaret Atwood (Dutu), Howard Jacobson (Mutengesi weVenice), Anne tyler (Kuchenesa kweShiri), Tracy chevalier (Othello), Jeanette winterson (Nyaya yechando), Gillian flynn (Hamlet) Y Edward St Aubyn (Mambo Lear) uye Jo Nesbø (Macbeth). Uku kuratidzwa kwezviri kutoverengwa uye zvichiri kutsikiswa.
3 Zvichiri kuuya
3.3 Harry Jacobson, Edward St. Aubyn naGillian Flynn
Virginia Wolf nemurume wake Leonard ivo vakatanga imba yekutsikisa Hogarth Press en 1917 muimba yavo yekutandarira umo mavakadhindirawo. Imba yaive Imba yeHogarth uye yaive muRichmond, London. Iwo ekutanga mabasa aive ake, asi bhizinesi rakakura uye vakatanga kuburitsa mabasa kubva padenderedzwa revazivi ve Bloomsbury, dzavaive chikamu.
Winterson akatanga chirongwa ne Mukana wenguva, iye vhezheni ipi Nyaya yechando. Shakespeare's classic inotaura nyaya ye Leontes, mambo weSicily, uyo anoramba mukadzi wake Hermione kupofumadzwa ne godo. Naiye iye, Leontes acharasikirwawo nemwanasikana wake Yakarasika, waanoramba, uye shamwari yake yepamwoyo, Polyxenes, Mambo weBohemia. Sarudzo dzako dzinozoita kuti upedze mazuva ako ese uchizvidya mukuzvidemba.
Saka Winterson anovaka nhoroondo nekubatanidza dzakasiyana Micro-nyaya yeavo mavara anovaita kuti vawedzere kuwedzeredza, asi nechishuwo chimwe chevanhu chekugona kunyora zvekare zvekare kugadzirisa zvikanganiso.
Iye munyori anozivikanwa, ane fashoni kwazvo izvozvi, anodzorerazve Dutu en Mbeu yemuroyi, novel inotaura nezve simba remashoko. Atwood anotsanangudza nyaya ye Felix Fletcher, ane makore makumi mashanu ekuberekwa uyo munguva yake yekusununguka anozvitsaurira kuna kuronga mitambo yemitambo mujeri.
Munyori Felix anosarudza anogara ari Shakespeare uye gore rino anotsvaga Dutu. Kubudikidza nemazwi epasirese ebasa rinotaura nezve iyo kutsiva Vasungwa vaFletcher vanozviita zvakanyanya. Asi Felix anozokwanisawo kutsiva kune wese akamuparadza munguva yapfuura pazuva rekuvhura kwemutambo.
Munyori anopa chiono chake che Kuchenesa kweShiri Muizvi Vhiniga moyo. Panguva imwecheteyo, zvinotora mukana kugadzirisa matambudziko maviri azvino: mamiriro emutorwa uye kusunungurwa kwevakadzi.
Iye protagonist ndiye Kate battista, mukadzi zvinoita kunge ane chokwadi nezvake, asi ndiani asina chokwadi kudaro. Iyo nei iri mhuri yakasarudzika yaanofanira kuchengeta, aine musayendisiti baba uye a hanzvadzi yechidiki uye whimsical. Zvakare, kukireshi kwaanoshanda, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka futi. Vana vanomunamata, asi vabereki vake havafarire kutendeseka kwakanyanya kwaKate mumaonero ake.
Asi rimwe zuva rinoratidzika Pyoter Cherbakov, muongorori anobatsira baba vake murabhoritari yake. Zviri mutorwa uye mvumo yako yekugara yave kuda kupera uye unozodzingwa kunze kwenyika kunze kwekunge usina zvikonzero zvemhuri zvekugara. Asi Dr. Battista vauya nehungwaru mhinduro iyo Kate yaanotenderana nayo.
Nezuva rekuburitsa remwedzi uno, Chevalier inopa vhezheni ye Othello en Mukomana mutsva. Musoro unoreva osei kokote, mwanakomana wediplomat kubva Ghana, uyo anotanga gore rechitanhatu kuchikoro. Isu tiri Washington muma 70s uye Osei, pamusoro pekuyedza kubatanidza uye kutsvaga shamwari, ndiyo akasiyana mukomana mutema kubva kuchikoro. Ita shamwari ne Dee, musikana anozivikanwa kwazvo, asi Ian, mumwe wevamwe vake, anosarudza kuputsa hushamwari ihwohwo.
Kuburitswa kwayo muSpain kwakarongerwa kwekutanga kwa April. Iye munyori weNorway anoita vhezheni kwazvo mumutsara wake wakasviba we Macbeth, , que yakagadzirirwa muguta rinonaya maindasitiri uye muma70. Iyo protagonist iri muongorori wemapurisa, Macbeth, akanakisa uye anonyanya kukosheswa nevezera rake, asiwo zvakanyanya chinzvimbo, huwori uye kupenga, nezvinetso nedoro nezvinodhaka.
Kune ayo Simba kurwa nevamwe vake, vabati uye shamwari dzakavimbika iye akabatanidzwa mukurwira kwake manomano emadzishe emishonga pamwe neiyo ye vezvematongerwo enyika chinja. Uye kana izvo zvaive zvisina kukwana, pane hukama neakadzidzisa Lady Macbeth, mudiwa wake, ndiani muridzi wekasino.
Shylock ndiro zita rangu iyi vhezheni yemunyori ye Mutengesi weVenice, iyo isati yatumirwa pano. Uye ivo vakamirirawo Dunbar, Mambo Lear yakadzokororwa naEdwart St. Aubyn, uye Hamlet de Gillian flynn, iyo yakarongerwa 2021.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Hogarth Shakespeare Chirongwa. Vanyori vakakura vanovhara mabasa aShakespeare